पहिलो पटक लक्ष्मी खड्का र चर्चित गायक राजु परियार बिच पर्यो यस्तो घम्साघम्सी दोहोरी,के के भयो त?(भिडियोसहित) – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
पहिलो पटक लक्ष्मी खड्का र चर्चित गायक राजु परियार बिच पर्यो यस्तो घम्साघम्सी दोहोरी,के के भयो त?(भिडियोसहित)
( भिडियो समाचारको अन्तिममा (तल) छ ।)त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले विद्यार्थीको स’मयमा क्षति न्यून हुने गरी शैक्षिक सत्र मिलाउने भएको छ । वार्षिक प्रणालीमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले केही क्षति बेहोर्नुपरे पनि सेमे’स्टर प्रणालीमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले कुनै क्षति नहुने गरी शैक्षिक सत्रको व्यवस्थापन गरिने जानकारी विश्ववि’द्यालयले दिएको छ ।
विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष प्रा’डा शिव’लाल भुसालले फागुन २५ गतेबाट स्नातक तहमा विद्यार्थी भर्ना गरी शैक्षिक सत्र सुरु गरिसकिएको जानकारी दिनुभयो । हाल स्नातक तहमा भर्ना भएका विद्यार्थीको परीक्षा आगामी पुस महिनामा गर्ने विश्वविद्यालयको योजना छ । यसका साथै स्नातकोत्तर तहको नयाँ शैक्षिक सत्र वैशाख अन्तिममा गर्ने निर्णयमा विश्वविद्यालय पुगेको छ । स्नातक तह तेस्रो वर्षको परीक्षाफल निर्धारित समयमा प्रकाशित गर्न सकिएको अव’स्थामा वै’शाखबाट स्ना’तकोत्तर तहको नयाँ भर्ना सुरु गर्न स’किने उहाँको भनाइ छ ।
स्नातक तहका अन्य वर्षका परीक्षाफल निर्धारित समयमा नै प्रका’शित हुने जनाइएको छ । स्नातक तहका पहिलो वर्षमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको केही समय क्षति भए पनि त्यसलाई तीन वर्षको हाराहारीमा मिलाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो । वार्षिक प्रणालीअन्तर्गत अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको अनलाइन कक्षा प्रभावकारी रूपमा सञ्चाल’न हुन नस’केकाले विद्यार्थीको केही महिना क्षति भएको उहाँको भनाइ छ ।
विश्वविद्यालयले फागुनमा स्नातक तहको भर्ना कार्यक्रम सुरु गर्ने निर्णयसँगै कक्षा १२ उत्तीर्ण विद्यार्थीले भर्नाका लागि केही महिना कुर्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा जेठ महिनामा पूरा गर्ने र भदौसम्म नतिजा प्रकाशित गरिसक्ने जनाएको छ । बो’र्डका अध्यक्ष प्राडा चन्द्रमणि पौडेलले भदौसम्म कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशित गरी उनी’हरूलाई स्नातक तहको अध्ययनको बाटो खुल्ने बताउनुभयो ।
तर विश्वविद्यालयको हालको योजनामा कुनै परिवर्तन नगरे विद्यार्थीले स्नातक तह’मा भर्ना हुन केही महिना कुर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । भदौमा स्नातक तहको नतिजा आएका विद्यार्थी पाँच महिना कुरेपछि मात्र बल्ल भर्ना हुने पाउनेछन् । त्रिविका शिक्षाध्यक्ष भुसालले फागुनलाई शैक्षिक सत्र मानिए पनि नयाँ परिस्थिति विकास भएमा स्नातक तहको शैक्षिक सत्र मङ्सिरमा समेत सार्न सकिने विकल्पसमेत रहेको बताउनुभयो । यसमा परिस्थितिअनुसार निर्णय लिन सकिने जनाइएको छ ।
उक्त भिडियो हेर्नुहोस:
Previous पि’डामा परेका सबैको घाउमा मल्हम लगाउँदै आएका चर्चित सञ्चारकर्मी सन्तोष देउजालाई के भयो यस्तो ? (भिडियो’सहित)
Next “के छ हजुर”भनेर संसार भर चि’निएका सचिन परियारलाई जन्मदिने आमा काठमाडौँ आइपुगे पछि…(भिडियोसहित)
“विश्वासको मत लिनुमा, ओलीको यस्तो, रहेछ मास्टर प्लान, भिडियो”हेर्नुस् ।
“मलाई सलमान खान मनपर्छ ,बिबाह पनि म उसैसँग गर्छु” नायिका सुष्मा कार्की(भिडियोसहित)
सृजना वाग्ले समाजसेवी भन्दै नारायण उ’फ्रिए, अपिल त्रिपाठीले भेटे अन्जु र नाराय’णलाई (भिडियो’सहित)
“कोरोनले लियो एकैघर,का दाजुभाईको ज्यान , को’रोनालाई ख्यालठट्टा नमानौ सबै सुरक्षित बसौ,
“यी हुन् पौने ३ करोड फलोअर्स,भएकी नेपाली मूलकी,टिकटक स्टार, हेरौं १२ तस्विर,
“केवल ज्वरो मात्र होइन, यी ३ लक्षण देखियो, भने पनि कोरोनाको, हुन सक्छ, हेर्नुहोस”
“अक्सिजन सकिए,पछि काठमाडौं लैजान १० लाख तिरेर हेलिकोप्टर मगाए तर हेलिकोप्टर,मै उनको ज्या,न गयो”